စင်္ကာပူနိုင်ငံ ဓမ္မဥယျာဉ်ကျောင်း တန်ဆောင်တိုင် ကထိန်အလှူပွဲ (Sembawang ) | ကျွန်မ၏ခံစားမှုများ သီကုံးရာ လွတ်လပ်ခြင်းအနုပညာ
October 28, 2009, 2:18 am Filed under: Festival (ပုံများကို အကျယ်ချဲ့ကြည့်ရန် ပုံများပေါ်တွင် click ခေါက်ပေးပါ)
အောက်တိုဘာလ (၂၅)ရက်နေ့ .. တနင်္ဂနွေနေ့ မနက်(၁၀)နာရီမှ ညနေ(၄)နာရီထိ စင်္ကာပူနိုင်ငံဓမ္မဥယျာဉ်ကျောင်းမှ ပြုလုပ်ကျင်းပသော ကထိန်အလှူပွဲကို ကျွန်မ သွားရောက်အားပေးခဲ့ပါတယ် .. ။ စင်္ကာပူနိုင်ငံ .. ကထိန်အလှူပွဲတွေကျင်းပတိုင်း အစားအသောက်ဈေးရောင်းပွဲအများစုကိုသာ တွေ့ကြုံဖူးလေ့ရှိသော ကျွန်မ .. ဒီနှစ် Sembawang မြန်မာဘုန်းကြီးကျောင်း ကထိန်အလှူပွဲမှာ မြန်မာ့ရိုးရာ အဆို ၊ အကလေးတွေ မြိုင်မြိုင်ဆိုင်ဆိုင်နဲ့ ထူးခြားစွာ တွေ့ကြုံခဲ့ရပါတယ် .. ။ (မြန်မာအစားအသောက်များ)
Dhamma Garden Buddhist TempleNo.2, Jalan Kerayong, Singapore 759300Tel: (65) 6405 5322 Like this:Like Loading...
October 28, 2009 @ 3:18 am Reply	(သာဓု)၃ သုံးကြိမ်ခေါ်သွားပါတယ်။ ဆစ်ဒနီမှာလည်း အဲဒီနေ့က လုပ်ပါတယ်။ မသွားဖြစ်ခဲ့ဘူး။
October 28, 2009 @ 3:28 am Reply	အမတို့ မိသားစုလည်း ရောက်တယ်။ ပထမဆုံး ဓာတ်ပုံကို ကြည့်ပြီး သားငယ်လေးက ပြောတယ်.. မန္တလေး သီချင်း ဆိုနေတာတဲ့… (စစ်ကိုင်းတံတား သီချင်းကို သူက အဲ့လို မှတ်ထားတာလေ)
Comment by sonata-cantata
October 28, 2009 @ 10:38 am Reply	သာဓုခေါ်ပါတယ် သူငယ်ချင်းရေ။ နောက်လဲ အလှုအတန်း များများလုပ်နိုင်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးပါတယ်။ လင်းလင်းwww.asiantraveler.co.cc
Comment by Lyn Lyn
October 29, 2009 @ 7:53 am Reply	So few people are attending and listing. Is it because of lousy music ?
October 29, 2009 @ 5:02 pm Reply	RSS feed for comments on this post.	TrackBack URI